रोचक Archives - Like For Nepal
नायिका साम्राज्ञी अभिनित म्युजिक भिडियो, युट्वमा मच्चियो तहल्का -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) पछिल्लो समयकी हिट अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह पनि म्युजिक भिडियोमा देखिन थालेकी छन्। केही अगाडि ‘माया प्रेम’ बोलको गीतमा देखिएकी साम्राज्ञी अभिनीत अर्को म्युजिक भिडियो ‘प्रभाव’ सार्वजनिक भएको छ । दसैँको अवसर पारेर सार्वजनिक भिडियोमा साम्राज्ञीको बो ल्ड अन्दाज देख्न सकिन्छ। प्रकाश विक्रम थापाको शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीतमा संगीत संयोजन सुरज शर्माले गरेका हुन् । शेखरराज खशजुको निर्देशन रहेको भिडियोमा साम्राज्ञीलाई अभिनयमा जोडीको रूपमा साथ विवेक खड्काले दिएका छन् ।​इन्डोर दृश्यले प्राथमिकता पाएको भिडियो सुशन मगरको छायाँकन, प्रवीण श्रेष्ठको सम्पादन छ । साम्राज्ञीको भिडियोमा देखिएको बोल्ड अवतारले निकै चर्चा पाएको छ । उनी रो मान्टिक मुडमा देखिएको उक्त भिडियोले युट्युमा तहल्का नै म च्चाए...
कठै ! करोड पाउने लोभ मा सबै सम्पत्ति गुमाएर रोगी छोरीलाई म,र्न छोडी आमा यसरी फरार ..
नवलपरासी जिल्लाको सुन्वल १० गैडाखाल केराबारी घर भएर हाल बसोबास गर्दै आएका झमिबहादुर दर्जी नाम गरेका एक पुरुष आफ्नी श्रीमती अनिता दर्जिले एकै झट्कामा चिट्ठामा सात लाख डु’बाएर घरमा भएकी मुटु”रोगी तिन बर्षिय छोरिलाइ एक्लै पा’रेर फरार भएको बताउँदै उनकै खोजिमा मिडियासामु आएकाछ्न । सधै यता गए उता गए भनेर मात्र हिड्ने श्रीमती एक्कासी केही नभनी हिडेकोले आफू अचम्ममा परेको उनी बताउछ्न । कठै बरा ! बाबू छोरीको रुवाबासिले नै पुरै अन्तरबार्ता सकियो । श्रीमतीलाई आफुले जस्तोसुकै अ”प्ठ्या”रो पर्दा पनि साथ दिएको तर श्रीमतीले भने आज बिरामी छोरिलाइ समेत एक्लो पारेर हिडेको भन्दै खुब भक्का”निए उनी । किस्ता तिर्न भनि हिडेकी श्रीमतीले आफ्नो फोनसमेत नलगेको उनी बताउछ्न । ह्वाट्सएपबाट ठगि भएका कुराहरू त हामी सुनिरहेका नै हुन्छौ, अनिता पनि उनै ठ”गहरुको गि”रो”हको च”ङ्गु”लमा परिन । ठगहरुद्वारा उनलाइ ह्वाट्सएपबाट ...
बलिउडको ‘सि’रियल कि’सर’ का रुपमा परिचित अभिनेता इमरान हाशमीले आफू एक अभिनेत्रीलाई चु’म्बन गर्न निकै ड’राएको खुलासा भएको छ । फिल्म ‘घनच’क्कर’मा अभिनेत्री विद्या वालनलाई चु’म्बन गर्न उनी निकै डराएका थिए । त्यही ड’रका कारण उनले विद्यालाई पटकपटक एउटै प्रश्न सोधिरहन्थे ।इमरान र विद्याले फिल्म ‘घनच’क्कर’मा कैयौँ चु’म्बन दृश्य दिएका छन् । विद्यालाई चु’म्बन गर्दा इमरान निकै ड’राएका थिए । जबकि यसअघिको फिल्ममा उनी जति खुसीका साथ अभिनेत्रीलाई चु’म्थे । ‘घनच’क्कर’मा माहौल ठीकविपरीत देखियो ।अभिनेत्री नेहा धुपियाको च्याट शोमा उपस्थित भएकी विद्याका अनुसार इमरानले विद्यासँग चु’म्बन दृश्य दिँदा ड’राउने कारण विद्याका पति तथा फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रोय कपुर थिए । ‘सिद्धार्थले के भन्लान् ? के तपाईंलाई लाग्छ कि उनले मेरो पेमेन्ट चेक दिन्छन् ?’ चु’म्बनपछि विद्यालाई इमरान यही प्रश्न सोधिरहन्थे । किनकि...
प्रेमिकाको आमालाई बचाउन मिर्गौला दिए, तर उपचार सफल भएपछि युवतीले अर्कैसँग बिहे गरिन
भनिन्छ सच्चा प्रेम गर्नेहरु प्रेमको लागि सबैथोक गु’माउन तयार हुन्छन्। तर, सबै प्रेमको अन्त्य भने सुखद हुँदैन। यस्तै दु’र्भाग्य भएका एक व्यक्ति हुन् मेक्सिकोका उजिएल मार्टिनेज। मेक्सिकोका युवा उजिएल मा’र्टिनेजमाथि प्रेमिकाले ठुलो घा’त गरेकी छन्। द सनका अनुसार पेशाले शिक्षक रहेका उनले आफ्नी प्रेमिकाकी आमाको ज्यान बचाउन एउटा मिर्गौला दिएका थिए। यद्यपि आमाको अ’परेसन भएको एक महिना पनि नबित्दै प्रेमिकाले उनलाई ब्रे’कअप दिइन्। टिकटकमार्फत मा’र्टिनेजले आफ्नो कहानी बताउँदै अहिले प्रेमिकाको अर्कैसँग विवाह भएको उल्लेख गरेका छन्। उनी दुःखी हुँदै पोष्ट गरेको उक्त भिडिओमा धेरै मानिसहरुले उनीप्रति सहानुभूति जनाएका छन्। यस्तै सहानुभूति जनाउँदै टिकटक प्रयोगकर्ताले गरेको कमेन्टको जवाफ दिँदै मार्टिनेजले आफू अहिले एउटा मि’र्गौलाको साथ पनि खुसी रहेको र आफूलाई पूर्वप्रेमिकाले गरेको कार्यप्रति कुनै किसि...
मन्त्री झाँक्रीलाई ‘भाउजु’ भन्दै मन्त्रालय चलाउने श’क्तिशाली सुब्बासाप ! १० वर्षदेखि मन्त्रालयमै रजगज…
देशका विभागीय मन्त्रालय कसले चलाउला ? उत्तर सामान्य छ मन्त्री । तर केही यस्ता मन्त्रालयहरू पनि छन् त्यहाँ मन्त्रीभन्दा बढी विचौलिया, कर्मचारी र कमिसनखोरहरूको रजगज चल्छ । सिंहदरबारभित्रै रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नेतृ रामकुकमारी झाँक्रीले पाउनुभएको छ । झाँक्री मन्त्री भए पनि मन्त्रालयमा हामीमुहाली भने अर्कैको चल्छ । मन्त्रालयकै एक सुब्बाले मन्त्रालयमा राज गरिरहेका छन् । धनकुटा घर भएका सुब्बा युवराज गिरी लामो समयदेखि मन्त्रालयमा स्टोर प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । तर उनी स्टोर र स्टोरको काममा होइन, जतिबेलै मन्त्रीकै अघिपछि भेटिन्छन् ।मन्त्रीको दैनिक कार्यतालिकाको विषयमा सचिव, सहसचिव र सचिवालयका कर्मचारी भन्दा बढी उनी जानकार हुन्छन् । अझ भन्दा, मन्त्रीको सबै कार्यक्रम उनैले तय गर्छन्, आफूलाई राज्यमन्त्री सरह सोचेर व्यवहार गर्ने गरेको मन्त्र...
बालिकाको टाउकोमा प्रेसर कुकर फ’सेको डाक्टरले पनि नि’काल्न सकेनन्, पछि बा’ध्य भएर यसो गरि,यो !
एजेन्सी। भारत गुजरात स्थित भावनगरमा एक बालिका घरमा खेल्दै थिइन्। घरमा भएको प्रेसर कुकरसँग खेल्दा-खेल्दै यस्तो भयो की उनले आफ्नो टाउको कुकरमा घुसाइन। घरमा उनका परिवारजनले बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अनेक प्रयास गरे। उनीहरु लगाएका अनेक जुक्ति केहिले पनि कम गरेनन्। जसपश्चात उनीहरु बालिकालाई अस्पताल लैजान बाध्य भए। त्यहाँ डाक्टरहरुले पनि कुकरबाट बालिकाको टाउको निकाले प्रयास गरे। तर, उनीहरु पनि सफल हुन सकेनन्। बालिकाको टाउको कुकरबाट निकाल्न अर्थोपेडिकदेखि बाल चिकित्सा विभागका डाक्टरहरु सबैले आफ्नो-आफ्नो तरिका अपनाए, सफलता भने कसैले पनि पाउन सकेनन्। आफूहरुले नसक्ने देखेपछि उनीहरुले भाँडा पसलको मान्छेलाई बोलाएर कुकर काट्न लगाए। सावधानीपूर्वक कुकर काटेपश्चात मात्रै बालिकाको टाउको निकालियो। बताइएअनुसार घटना शुक्रबार को हो। बालिकाले टाउको कुकरमा फसाएपछि आफू तथा डाक्टरहरुले गरेका सबै...
संसारमा धेरै अनौठा ठाउँहरू छन्, जसलाई थाहा पाउँदा मानिसहरू विश्वास गर्न सक्दैनन् । एउटा यस्तो ठाउँ छ जसको बारेमा थाहा पाउँदा तपाई छक्क पर्नुहुनेछ । आउनुहोस् हामी तपाईंलाई यो अनौठो ठाउँको बारेमा बताउँछौं जहाँ ७० वर्षमा कुनै पनि मानिसको मृ’त्यु भएको छैन ।यो सुन्दा तपाईंलाई अनौठो लाग्न सक्छ तर यो पूर्ण सत्य हो । त्यहाँ कोही पनि बस्दैन होला भन्ने प्रश्न पनि मनमा लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो होइन । यहाँ मान्छेहरू पनि बस्छन् । तर, यो अनौठो ठाउँमा कसैको मृ’त्यु भने भएको छैन ।यो अनौठौ ठाउँ नर्वेमा छ । यहाँ धेरै सुन्दर ठाउँहरू छन्, जसकारण यो विश्वको प्र’सिद्ध पर्यटकीयस्थलहरूमा समावेश छ । नर्वेको यो ठाउँको नाम लङ इरबेन हो । यो ठाउँमा कोही म’र्न सक्दैन, यसको कारण थाहा पाएपछि तपाईंको मनमा प्रश्न उठ्नेछ कि यस्तो किन ?नर्वेलाई मि’डनाइट सन पनि भनिन्छ । यो देशमा मे महिनादेखि जुलाईको अन्त्यसम्म सूर्य अस...
कलाकार जयकिशन बस्नेत हरेक रात टिकटक लाइभमा देखिन्छन्। उनको लाइभमा फलोअर्स पनि सयौं हुन्छन्। भ्यूअर्ससँग जयकिशन अनुरोध गर्छन् – ‘प्लिज मलाई चस्मा लगाईदिनुस्’। यत्तिमा उनी रोकिँदैनन्। उनी माग्दै जान्छन्, ‘मलाइ कार दिनुस्, मेरो स्क्रिनमा रकेट उडाइदिनुस्।’ जयकिशनले मागेको चस्मा, कार र जेट विमान टिकटकमा पाइने क्वाइन हो। गिफ्ट अनुसार क्वाइनको मूल्य फरक फरक पर्छ। गुलाब र टिकटकको लोगो गिफ्ट पाउँदा एक क्वाइन पाइन्छ। चस्माको १९९ क्वाईन, मोटरसाइकलको २९८८, कारको ७०० र रकेटको २० हजार क्वाईन पाइन्छ। यस्ता अरू पनि गिफ्ट हुन्छन्, धेरै-धेरै क्वाइनका। त्यसरी पाइने क्वाइनलाई डलरमा रूपान्तरण गर्न मिल्छ। त्यसैले पैसा पाउनकै लागि उनले आफ्नो लाइभका भ्यूअर्ससँग गिफ्टका लागि अनुरोध गरेका हुन्। उनी घण्टौँसम्म टिकटक लाइमा यसरी नै बिताउँछन्। कमेन्ट सेसनतिर हेर्दा प्रशस्तै यस्ता कमेन्ट देखिन्छन्- ‘तपाईंलाई ला...
२१ वर्षकी युवतीले सुन पसलमा पुगेर सुनको सिक्री चो रेर भागेको भिडियो भाइरल
5जिरो किमी स्थितपामे चापाकोट सुन दुकान मा चोरी भएको छ एक पसलमा घटेको छ । अधिकांश समय प्रहरीको उपस्थिति रहने जिरो किमि चोक नजिकैको पामे चापाकोट सुनचाँदी दुकानबाट गत शुक्रबार ९पुस १६ गते० झन्डै एक लाख मूल्य पर्ने सिक्री चोरी गरी महिला फरार भइन । दुकानका सञ्चालक केशव घतानेले घटनाको बारेमा तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराए । घतानेले चोरी गरेर भाग्ने महिलाले चोरी गर्दै गरेको र भाग्दै गरेको स्पष्ट देखिने सिसीटिभी फुटेज नै सार्वजनिक गरे । तर घटना घटेको चार दिन बित्दा समेत प्रहरीले महिलालाई पक्राउ गर्न सकेन । सिक्री किन्ने बहानामा पसलमा पुगेकी महिलाले सञ्चालक घतानेलाई झुक्क्याएर सिक्री गोजीमा हालेर फरार भएकी थिइन् । घटना घटेको ४ दिनसम्म ती महिला को हुन् ? चोरेर कहाँ फरार भइन् ? भन्ने कुराको केही पत्तो लागेको छैन । प्रहरीमा खबर गर्दा समेत केही पत्तो नलागेपछि सञ्चालक आफैले सार्वजनिक गरेको सि...
कोठाका भित्ताभरि दर्जन तस्बिर छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सका सुरुवाती दिनदेखिकै जहाजका तस्बिरहरूले उनको कार्यकक्षको शोभा बढाएको छ । तस्बिरमा भएकामध्ये कतिपय जहाज अहिले ‘फेज आउट’ भइसकेका छन्, कति चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलमा ग्राउन्डेड अवस्थामा ‘घाम तापिरहेका’ छन् । उनको बाल्यकाल तिनै जहाज उडाउने पाइलट बन्ने सपनाका साथ बित्यो । जबकी अभिभावक चाहन्थे उनी डक्टर बनुन् । अभिभावकको इच्छा विपरित पाइलटका रूपमा उनले जहाज उडाउन थालेको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ । उनी अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको पाइलट हुन् । यति मात्र होइन अपरेसन म्यानेजरका रूपमा निगमको नेतृत्व तहको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै छन् । उनी हुन् दीपु जुहार्चन । बाबु-आमा-छोराको उडान सुन्धारास्थित नेपाल वायुसेवा निगमको चौथो तल्लामा रहेको उनको कार्यालयका भित्तामा सजिएका जहाजका फोटोबारे उनले भने, ‘ यो कोठामा पुरै हिस...